Paris Saint-Germain Oo Dooneysa Inay Iska Iibiso Neymar Xagaagan.
HomeHoryaalka FranceParis Saint-Germain oo dooneysa inay iska iibiso Neymar xagaagan.
March 11, 2022 Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa in ay isku dayi doonto in ay iibiso Neymar inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
30-sano jirkaan ayaa ku dhibtooday inuu sumcadiisa u soo bandhigo kooxda reer France inta lagu guda jiro xilli ciyaareedka 2021-22, isagoo ka qeyb qaatay kaliya afar gool iyo shan caawin 19 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Neymar waxa uu maamulay 91 gool iyo 57 caawin 135 kulan oo uu u saftay PSG tan iyo markii uu ka yimid Barcelona , laakiin waxa uu la dhibtoonayay dhibaatooyin badan oo dhaawacyo ah, sidoo kale waxaa jiray arrimo ka baxsan garoonka.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Brazil ayaa kaliya heshiis cusub u saxiixay kooxda ka dhisan caasimadda bishii May ee lasoo dhaafay, isagoo qandaraaskiisa haatan kooxda ku egyahay June 2025.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay saxafiga Romain Molina , PSG ayaa haatan ku faraxsanayn booska Neymar ee kooxda, waxayna isku dayi doontaa inay iska iibiso inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Hogaamiyeyaasha Ligue 1 ayaa lagu xamanayaa inay isku diyaarinayaan inay ku iibiyaan dalabaadka ugu sarreeya, waxaana ay ku rajo weyn yihiin inay awoodaan inay weydiistaan ​​ku dhawaad ​​€ 100m (£ 84m) kooxaha xiiseynaya.
Barcelona ayaa horay loola xiriirinayay ciyaaryahankeedii hore, laakiin ma cadda in kooxda reer Catalan ay xiiseyneyso inay dib ugu soo celiso Camp Nou xagaagan.